Umhlinzeki Oholayo Wemishini Yokucubungula Ingilazi Yezimoto
Isevisi yokuma okukodwa kusuka kumklamo kuya ezingxenyeni zokuthengwa nokukhiqizwa kwezitshalo zengilazi zezimoto namathuluzi.
I-WUXI FUZUAN MACHINERY TECHNOLOGY Co., Ltd. ikhethekile kakhulu ekwenziweni kwemishini yengilazi yezimoto. I-FUZUAN MACHINERY yasungulwa ngo-2011, ithuthukisa futhi ikhiqize imishini nemishini yokucubungula ingilazi esetshenziswa ezimotweni iminyaka engaphezu kwe-10. Ngenxa yolwazi nolwazi olutholwe kuyo yonke le minyaka, sinikeza amakhasimende ethu ukuklama, ukukhiqiza, kanye nokugunyazwa kwemishini yengilazi yezimoto ngesiphakamiso sochwepheshe......
Imishini Yokucubungula Ingilazi Yezimoto
Vacuum Pre Lamination Car windshields Vacuum ri...
INKONZO YANGAPHAMBI KOKUDAYISWA
Ithimba lezobuchwepheshe le-FUZUAN lizokunikeza isevisi ezungezile nefika ngesikhathi ngaphambi kokuba wenze isinqumo sokugcina.
INKONZO EMVA KOKUDAYISWA
I-FUZUAN izokunikeza isevisi ephelele nehlelekile yangemuva kokuthengisa, engaletha isevisi yayo yobuchwepheshe ngokushesha ukuze kuncishiswe amathuba okungasebenzi kahle kwemishini futhi kufinyeze isikhathi sokuphumula.
Zonke izisetshenziswa ezihlinzekwa yi-FUZUAN MACHINERY zizogcinwa impilo yonke, kanye nokusekelwa kwamahhala kwezobuchwepheshe.
I-Automotive Glass Assembly
I-accumulator yengilazi evundlile ye-windshi egobile...
Umhlangano we-PVB we-Manual umugqa wemoto ye-windshield umhlangano
Umshini wokufafaza nge-powder wama-windshields aminated
Ukutshekisa imishini yokulayisha igesi ngaphambi kokusika i-pr...
Sihlinzeka ngezixazululo ze-Automotive Glass Turnkey